Umatshini we-CNC oomatshini boMatshini be-china oomatshini be-china oomatshini be-CNC, abaXhasi
I-120watt CO2 i-Laser Ukusika Umatshini I-Laser Tube Laser Power Supply Es100
1. I-Es100 yeLaser Power Power yeempawu eziphambili: Umsebenzi we-PFC wokuqala, i-AC90-250V yoluhlu olubanzi lokufaka umbane, jikelele kuwo onke amazwe ombane. Uyilo lwe-2 olukhethekileyo lweqokobhe langaphandle, inkangeleko entle ngakumbi, ukusasaza okungcono kobushushu. Imowudi yolawulo lwangoku oluphuculweyo, i-laser ezinzileyo, ukuhambelana okungcono, ukulungelelanisa ngakumbi iintlobo ezahlukeneyo zemibhobho ye-laser. Ukulawula amandla kwe-4, umsebenzisi angakwazi ukulawula i-laser kunye nomqondiso ophezulu okanye ophantsi. Iqhosha 5.With uvavanyo, kulula ukuvavanya laser ityhubhu kunye Es100 amandla suppl ...
Umthombo wamandla we-HY-W150 150W laser co2 we-150 180w iimveliso ezahlukeneyo zetyhubhu
Eyona nto iphambili kwi-W150 CO2 yokuhambisa umbane kwe-150w co2 yamandla e-laser Amandla aphambili Iimpawu zoMlinganiso ne-1650mm 1850mm 2050mm 130w 150w 180w co2 laser tube 1.Good Compatitility: Inokusebenza kwi-130w 150w 180w iityhubhu zelaser ezenziwe ngemizi-mveliso eyahlukeneyo. 2.has uzinzo lwamandla elungileyo kunye nokuziqhelanisa namandla, inokongeza ixesha lenkonzo yetyhubhu ye-laser ngokukhawuleza. 3, ulawulo Easy: ukuqala nokumisa laser kunokuba ea ...
Ukubonelelwa kweMbane eyi-100W yeLaser yeLampu eyi-100w
Uphawu oluphambili lwe-100w 120w uzinzo lwamandla e-laser 1. Uluhlu olubanzi kakhulu lwegalelo leVoltage: AC110-AC260V 2. Umsebenzi we-voltage stabilizer: xa umbane wegalelo ungazinzanga, utshintsho lwangoku lungaphantsi kwe-1%. Ukusetyenziswa ngokubanzi kumazwe angazinzanga e-AC. 3.Ukuhambelana okuhle: Inokusebenza kwi-80W, 100W, 120W iityhubhu zelaser ezenziwe ziifektri ezahlukeneyo. 4. Le Power Supply ineqhosha "TEST" elinokuvavanya imveliso yelaser ngesandla. 5. I ...
Umthombo wamandla weLaser Tube ongu-180-200w W200
Imodeli: Ukuhambisa umbane we-HY-W200 laser ye-180w-200w iityhubhu zelaser kumatshini wokusika we-laser. Uluhlu lokupakisha: <1> HY-W200 unikezelo lwamandla * 1pc; Amandla ombane angama-200w H2-W200 Uphawu oluphambili 1. Uluhlu olubanzi kakhulu lwegalelo leVoltage: AC110-AC220V 2. Okwangoku kukho uzinzo oluphezulu: xa umbane wegalelo ungazinzanga, iqondo lotshintsho lwangoku lingaphantsi kwe-1%. 3.Ukuhambelana okuhle: Inokusebenza kwi-180w-200w EFR / RECI / YONGLI, WEEGAINT / SP ect brand co2 laser tubes eyenziwe di ...
Umthombo we-laser we-HY-W200 we-180 / 200w laser co2 tube
Amandla ombane angama-200w H2-W200 Uphawu oluphambili 1. Uluhlu olubanzi kakhulu lwegalelo leVoltage: AC110-AC220V 2. Okwangoku kukho uzinzo oluphezulu: xa umbane wegalelo ungazinzanga, iqondo lotshintsho lwangoku lingaphantsi kwe-1%. 3.Ukuhambelana okuhle: Inokusebenza kwi-180w-200w EFR / RECI / YONGLI, WEEGAINT / SP ect brand co2 laser tubes ezenziwe ziifektri ezahlukeneyo. 4. Le Power Supply ineqhosha "TEST" elinokuvavanya imveliso yelaser ngesandla. 5. Umbane weLaser unamandla aphezulu ...
Umatshini wokuthengisa umatshini wokusika umatshini we-1325 Wood CNC umzila we-Atc CNC
I-ATC cnc router enesixhobo esiguqukayo sokutshintsha izixhobo esiyi-12, inokukhetha izixhobo ezili-10, izixhobo ezi-8, izixhobo ezi-6 njl.
I-9.0KW HSD ATC yokuluka eyaziwayo, amandla okusika anamandla, ingxolo ephantsi, ixesha elide lokusebenza. Olunye uqwalaselo kubandakanya inkqubo yolawulo lwe-Taiwan LNC, i-Japan yaskawa servo motor, i-Taiwan Detal inverter, isikhokelo sikaloliwe se-HIWIN, i-Helical rack njl.
Ilungele ifanitshala yephaneli, ifanitshala yeplanga eqinileyo, ifanitshala yeofisi, imveliso yomnyango ngomthi, kunye nezinye izinto ezingezizo zesinyithi nezithambileyo zentsimbi.
Ngokubanzi Isetyenziswa Isixhobo Esitshintshayo Isitshintshi seWood Wood sokukrola ukusika umatshini weCNC wokuCwangciswa kwefanitshala
I-ATC cnc router enesetyhula yezixhobo ezitshintsha izixhobo eziyi-12, inokukhetha izixhobo ezili-10, izixhobo ezi-8, izixhobo ezi-6 njl.
3 Axis CNC umzila Wood nangokukrola Machine for MDF Kitchen iKhabhinethi Ifenitshala
Olu hlobo lokunyusa i-APEX1325 cnc umzila wabathengi bearhente, itafile yeT-slot, inkqubo yolawulo lweNCstudio, inyathelo lemoto kunye nabaqhubi, i-3.0kw yokupholisa amanzi yokuluka njl njl. Imodeli Machine ungenziwa ngemfuneko. Iminyaka emi-2 iwaranti ubomi bonke ngenkxaso yobuchwephesha, uqeqesho kwi-Intanethi nalo lungathumela injineli ukuba lenze uqeqesho kumzi mveliso welinye ilizwe Iiparameter zobuGcisa: Hayi Inkcazo Ipharamitha 1 X, Y, Z Indawo yokuSebenza 1300mmx2500mmx200mm 2 Ubungakanani beTafile 1450mm × 2940 ...
IZiko leMachining ye-CNC yokuSika amatye kunye nokuCoca ukuthengisa okushushu ngo-2021
Olu hlobo lomatshini ziimveliso eziphambili zeJinan APEX CNC Equipment co,. Ltd egxile kwimveliso yomatshini. Izinto ezinokucwangciswa ngumatshini kubandakanya ithayile, imabhile, inyengane, imhlophe emhlophe, ilitye lentlabathi, iglasi, isinyithi, i-3D yemabhile yendalo, ilitye elenziweyo, ilitye lengcwaba, isiganeko, njl.
Umnyango woMthi wokwenza i-CNC Umatshini wendlela kunye neTafile eziBini
Wood CNC umzila kunye 4 Rotary Axis New Model Heavy Iron umzimba
Ind I-spindle iyakwazi ukujikeleza i-180 degree, ngokukodwa eyenzelwe i-curve surface cabinet, iingcango kunye nokuhonjiswa kwangaphakathi. kananjalo ngenxa yokubumba okuqhubekayo.
Can Ingasetyenziselwa ubunzima-processing kunye Umshini ubambe indlela kunye nomqokeleli uthuli.
♦ Ifakwe izinto ezisemgangathweni eziphezulu kumatshini, ezinje nge-HSD ATC yokuluka, kunye ne-spindle Yaskawa servo motor kunye ne-Taiwan Delta Inverter, impompo ye-Becker Vacuum,
I-Hiwin yomgama wesikhokelo sikaloliwe, inkqubo yolawulo lwe-SYNTEC njalo njalo, ukugcina umatshini ekwimeko entle nasemva kokusebenza iminyaka emininzi.
Ifakwe 400mm axis rotary
1. Sisebenzisa 5.5kw umqokeleli wothuli ngesilinda esiphindiweyo ngesiqhelo 3. 0kw kulungile, 5. I-5kw yanele ngokupheleleyo, Akulunganga ukusebenzisa enye enkulu
2.Iyakwazi ukufunxa uthuli kunye nokucocwa, ukucoca indawo yokusebenza nokukhusela impilo yabantu)